Virgil. Chirangaridzo cherufu rwake. 25 mitsara yakasarudzwa | Zvazvino Zvinyorwa
Virgil kuputika. Virgilian paki. Naples.
Publio Virgilio Maón akafa pazuva rakafanana nanhasi Brindisi, in 19 BC C. Anofunga vamwe nhetembo yakakurumbira yechiLatin uye pasina kupokana iyo ndeimwe yeakakura ekare. Kubva pakusingaperi Aeneid Kwake Bucolic, basa rake rinoramba riri chinhu chinoyemurika uye kufurirwa mazita akafanana nevamwe vako Ovid kana, gare gare, Dante aligheri. Nhasi ndinodzokorora muchidimbu chimiro chake uye ndinotora Makumi matatu emitsara yake.
Publio Virgilio Maón
Ndinofanira kubvuma kuti ndine kumwe kusada Virgilio. Icho chiri chega chega uye chisingachinjiki kunzwa kune izvo zvandaifanirwa kududzira kubva pairi mugore rangu rekutanga yeyunivhesiti. Izvo Aeneid naAeneas nechikwata chese chevaGiriki neveTrojans takayambukirwa zvishoma nemamita ake uye mavhesi ake ezvibatanidzwa uye zvinyadzo zvachose. Asi zvisinei nezvazvo, ini ndinoona kukosha kwayo. Aya ndiwo mamwe emabasa ake anozivikanwa.
Iyo Inobatsira: La epic inonyanya kukosha yetsamba dzeLatin. Akazvitanga mukati megore 30 BC. C. uye haana kuipedzisa nekuti akafa. Ndiyo kudetemba chiono chekumusha kwake uye yakakamurwa kuva Mabhuku e12. Rufu rwakamushamisa, asi akange arisiya risina kupera uye akatoiraira kuti riparadzwe. Asi Augusto akazviburitsa. Nziyo nhanhatu dzekutanga dzakafemerwa Odyssey yaHomer, uye yekupedzisira 6 mukati Iyo Iliad. Virgil inosvitsa uye inobatanidza vaRoma neanegamba Trojan vanhu.
The Bucolics: Rimwe bhuku, rakakamurwa kuva 10 eclogues, maari anochinja zvachose wechitatu uye anosiya hondo uye anorumbidza magamba ekuimba kuhupenyu hwehufundisi. Zvese zvinhu kubva pakufunga.
MaGeorgics: Achibatanidza nezvataurwa pamusoro, akanyora izvi nhetembo yakatsaurirwa kurima, asi ikozvino mamiriro acho ari echokwadi, ndiko kuzvipira kwekushanda ivhu, kunyange riinewo muripo.
Unyanzvi hwekuda: Rimwe remabasa ake ane mukurumbira. Vari Mabhuku matatu kana nziyo nemazano ehukama hwerudo uye maitiro ekuibata nekuapfeka.
Fortune anofarira vakashinga.
Anofara murume akatsika-tsika kutya kwake kwese uye anogona kuseka kusvika kwerufu kunokunda zvese.
Kana ndikatadza kunyengerera vanamwari vekudenga, ndichafambisa avo vepasi.
Avo vanotenda vanogona.
Nguva yekurarama ipfupi uye haigadzirisike kune wese munhu.
Hatisi tese tinogona kuita zvese.
Rudo runokunda zvinhu zvese; Ngatipei nzira yerudo
Haisi Fate inotikurira. Tinofa isu uye tinofa ndiye muvengi anotitambudza. Hupenyu nemaoko tine zvakawanda saiye.
Ruponeso rwevakakundwa chete harusi rwekutarisira kuponeswa.
Kunyangwe dai ndaive nemiromo zana uye nendimi zana, uye izwi rangu raive rakagadzirwa nedare, ndaisakwanisa kuverenga mhando dzese dzematsotsi.
Chii chiripo kusazvuzvurudza moyo yevanhu kure, haiwa inouraya nzara yegoridhe?
Kurara ihama yerufu.
Hasha dzakadai dzinokwana sei mumweya yekudenga?
Zvinhu zvevanhu zvinoenda misodzi, uye matambudziko avo anobaya moyo.
Kutya kunowana mweya isingafadzi.
Usakotamira panhamo; asi shinga kupokana nayo sekuwanda kunoita rombo rako.
Usavimba nebhiza, Trojans. Chero zvazvingava, ndinotya maDanaos, kunyangwe vakauya nezvipo.
Wese munhu anokundwa nechishuwo chake.
Rudo runokunda zvese, isuwo tinopa kune Rudo.
Asi kana iwe uine chishuwo chakakura chekuziva nguva yedu inosuruvarisa uye kunzwa muchidimbu kukwirisa kukuru kwaTroy, kunyangwe pfungwa ichivhundutswa nekungofungawo kwayo uye ichidzoka mukutya, ini ndichatanga.
Dismal love, kune zvipi zvinhu zvausingamhanyise moyo wemunhu!
Ah, dai Jupiter yaizondidzosa makore apfuura kare!
Mumwe nemumwe anotorwa nemafaro ake ega.
Zviri nyore ndiko kuburukira mugehena.
Kunze kwangu ini ndinoshandisa zvombo zvangu uye kamwe chete nazvo mumaoko, ndinoshaya huchenjeri hunodiwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Virgil. Chirangaridzo cherufu rwake. 25 mitsara yakasarudzwa